Inaad shaqaale tahay iyo inaad yeelato ganacsi kuu gaar ah - Amjambo Africa
Marka qof loo shaqaaleeyo shaqaale ahaan, waxaa jira qaddar caddaalad ah oo la saadaalin karo. Tusaale ahaan, tirada saacadaha la shaqaynayo toddobaad kasta waxay u badan tahay inay yaraato, oo shaqaaluhu wuxuu si joogto ah u heli doonaa jeegga mushaharka qaddar go’an oo loogu talagalay shaqada la dhammaystiray. Iyada oo ku xidhan loo shaqeeyaha, shaqaale ayaa laga yaabaa inuu helo dheefaha sida caymiska caafimaadka, wakhtiga fasaxa, iyo qorshayaasha kaydka hawlgabka. Shaqaaluhuna waxay yeelan karaan tababar xirfadeed iyo fursado koritaan, markay u shaqeynayaan taageere urur. Ahaanshaha shaqaale micnaheedu waa ka qaybqaadashada dadaalka kooxeed si loo fuliyo hadafka guud ee shirkadda. Milkiilaha ayaa aakhirka mas’uul ka ah inuu hubiyo in dhinac kasta oo meheraddu ay ku shaqaynayso si buuxda.
Tan waxaa ka mid ah wax kasta laga bilaabo hubinta in shaqo ku filan ay imaanayso si loo sii wado ganacsiga, ilaa qaansheegashada iyo ururinta lacagaha macaamiisha ama macaamiisha, hubinta in qalabku si habboon u shaqeynayo, hubinta in kirada la bixiyo, bixinta canshuuraha, xaraynta waraaqaha ganacsiga, iyo shaqaalaynta iyo shaqada ka erya. Shaqadu marna uma dhammaanayso milkiilaha meheradda, waxaana inta badan loo baahan yahay saacado dheer si ganacsigu u sii socdo.
Si kastaba ha ahaatee, oo ay weheliso khatartu waxay timaadaa suurtogalnimada guusha iyo abaalmarinta. Shirkado badan oo ku guulaystay Ameerika waxaa iska leh ama wada leh muhaajiriinta jiilka kowaad. Bilowga ay leeyihiin dadka soo galootiga ah ayaa si weyn u koray 25-kii sano ee la soo dhaafay, iyagoo si joogto ah uga baxsan ganacsiyada ay bilaabeen milkiilayaasha ku dhashay Mareykanka.
Kaliya maahan qaar ka mid ah meheradahaas kuwo macaash badan u leh milkiilayaasha, waxay kaloo abuuraan shaqooyin. Milkiilayaasha meheraddu waxay dareemi karaan inay ku wanaagsan yihiin kaalintii ay ku lahaayeen wax -ku -biirinta bulshada maxalliga ah iyo inay fursado siiyaan dadka kale. Dhinac kale oo la tixgeliyo waa farxad shaqsiyeed, mas’uuliyadaha hadda jira, iyo yoolalka guud ee nolosha.
NextDoorashada nooc hay’ad ganacsi yar